ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको जेठ १० देखि सेयर लिलामीमा आउंदै, आवेदन दिन कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको जेठ १० देखि सेयर लिलामीमा आउंदै, आवेदन दिन कहाँ जाने ?
काठमाडौं - जेठ १० देखि ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले सेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले सर्वसाधारण समूहको ३ लाख १३ हजार ७१३ कित्ता र संस्थापक समूहको ३ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता गरी जम्मा ६ लाख ५१ हजार २१३ कित्तासेयर लिलामीमा ल्याइने जनाएको छ । यसमा जेठ १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
यता, संस्थापक सेयरका लागि बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय हरिशंकर रोड, बग्लुङ्गबाट बोलपत्र फारम भर्न र बुझाउन सकिनेछ । सर्वसाधारण समूहको लागि भने लक्ष्मी क्यापिटल नयाँ वानेश्वर तथा लक्ष्मी बैंकको वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, पोखरा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढी शाखाबाट फारम भर्न पाइनेछ । ग्रीनको केन्द्रीय कार्यालय तथा बेनी र पोखरा शाखाबाट पनि सर्वसाधारण समूहको बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ ।